Booliska oo Mombasa ku qabtay maandooriye – Star FM Kenya
Booliska oo Mombasa ku qabtay maandooriye
July 31, 2016 starfmke 0 Comment
Ciidamada booliska ayaa dekedda weyn ee Mombasa ku qabtay kunteenaro ay ku jirtay daroogada nooca loo yaqaanno Cocaine oo uu qiimeheeda ku kacayo ilaa 300 oo million oo shilin.
Ilo wareedyo ay soo xigteen qaar ka mid ah warbaahinta maxaliga ah ayaa sheegay in maandooriyehaasi loo waday qof caan ah oo ka gabacsada kala gudbinta maandooriyeyaasha la isaga kala gudbiyo dalalka Kenya iyo Tanzania.
Wararka ayaa sheegaya in daroigadaasi ay suurta gal tahay in laga soo qaaday wadanka Cumaan in kastoo aan si rasmi ah loo xaqiijinin.
Ilo wareedyada ay soo xigteen jaraa’idka gudaha dalka kasoo baxa ayaa intaas ku daray in taliyaha guud ee ciidamada booliska Kenya Joseph Boinet iyo saraakiil kale ay ku wajahanyihiin Mombasa si ay usoo arkaan maandooriyaha gacanta lagu dhigay.
Madaxa ciidamada amaanka ee gobolka xeebta Francis Wanjohi ayaa sheegay in hadda booliska ay wadaan howlgallo ay ku baarayaan konteenaro kale oo laga yaabo in ay ku jiraan maandooriyeyaal kale ama bafeecoiyin sharci darro ah.
Ciidamada ilaalada dekedda iyo garoomada diyaaradaha dalka ayaa mudooyinkii dambe sare u qaaday dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ah kala gudbinta waxyaabaha koontarabaanka ah oo ay ka mid yihiin muqaadaraadka iyo badeecooyinka kale.
← Is dilka ciidamada booliska oo qeylo dhaan laga muujiyay
Hoogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka oo kulan la yeeshay masuuliyiinta Schoollada Garissa →
Wasiirada arrimaha dibadda oo difaacday talaabada ay xukumadda dalka uga talxiirtay dad u dhashay waddanka Taiwan
August 11, 2016 starfmke 0
Ururka LSK oo booliska ugu baaqay in ay sameyaan baaritaana ku aadan qareen la la’yahay
January 12, 2017 starfmke 0
Xisbiga ODM oo ugu baaqay dowlada in aysan caburinin hogaamiyaasha mucaaradka
January 14, 2017 starfmke 0